Maitiro ekuisa iOS 2 beta 11 yemahara pasina account yekuvandudza | IPhone nhau
Sezvo vazhinji venyu mave kutoziva, anga ave mazuva angangoita makumi maviri kubvira Apple yaburitsa iOS 11, inotevera vhezheni yayo mbozha inoshanda sisitimu ye iPhone ne iPad pachiitiko cheWWDC 2017, izere nenhau, kunyanya maererano neshanduko. iyo iPad iri kunetsekana.
Chitatu chekupedzisira, Apple "yakashamisika" nekumisikidzwa kweIOS 11 Beta 2, vhezheni itsva bvunzo yevagadziri Zvisinei, chokwadi ndechekuti Izvo zvinokwanisika kuisa iOS 11 beta 2 isina akaundi account, yemahara, uye zviri nyore, pasina kushandisa komputa. Uye zvino isu ticha tsanangura maitirwo azvo.
1 Isa iOS 11 Beta 2 kunyangwe usiri mugadziri
1.1 Zano rapfuura
1.2 Kana watove nekuisa iOS 11 Beta 1…
1.3 Kana ino inguva yekutanga iwe kuenda yekuisa iOS 11 beta ...
Isa iOS 11 Beta 2 kunyangwe usiri mugadziri
Sezvo ini ini ndakakuudza nezuro, yechipiri beta vhezheni yeIOS 11 yakaburitswa Chitatu chapfuura kunyanya inotarisa pane zvakajairika bug fixes uye kuita uye kugadzikana kugadzirisa, nepo ichokwadi icho inosanganisira zvishoma zvezvinhu zvitsva inonakidza kwazvo, zvese zveiyo iPhone uye iyo iPad.
Kana iwe zvakare uchidisa ese matsva maficha uye mashandiro muIOS 11 zve iphone y yeIpadNhasi une rombo rakanaka nekuti uchakwanisa kuisa iOS 11 Beta 2 zviri nyore, kunyangwe kana usina account yekuvandudza uye usingade rubatsiro rwecomputer. Chokwadi, iwe uchave unokwanisa kuita iyo yese maitiro kubva kune iyo iPhone kana iPad pachayo kwaunoda kuisa.
Usati wamhanyisa, chengeta zvishoma zvinhu mupfungwa:
Zvichida, gadzira backup kubva pamidziyo yako, muTunes kana muICloud, asi zviite.
Ramba uchifunga kuti iri bvunzo vhezheni uye, kunyangwe iri yakagadzikana, ichine mabugs ausingakwanise kubata nawo nekudaro, kana zvichibvira kuisa pane yechipiri mudziyo.
Kana watove nekuisa iOS 11 Beta 1…
Kune avo vashandisi vakatoedza kuisa iyo yekutanga beta yeIOS 11 vasina kuve vagadziri, iwe unofanirwa kungotevera zvinotevera matanho:
Dzorerazve iyo iOS beta software profil nekudzvanya kubatana uku.
Dhinda sarudzo "iOS 11 (Yakagadziridzwa) uye gadza yakagadziridzwa iOS 11 beta mbiri.
Iwe uchabvunzwa kutangazve yako iOS chishandiso. Hit the restart sarudzo uye rega iyo yekutangazve ipedze.
Mushure mekutangazve yako iPhone kana iPad, vhura iyo Settings app uye enda kuGeneral -> Software kugadzirisa uye ipapo uchaona beta 2 yeIOS 11. Dzvanya "Dhawunirodha uye gadza" uye enda kumberi !!
Kana ino inguva yekutanga iwe kuenda yekuisa iOS 11 beta ...
Sekutaura kunoita, "kune nguva yekutanga yezvose". Kana iyi iri nyaya yako, ingo tevera matanho ari pazasi uye iwe unenge usiri kunakidzwa nenyaya dzese muIOS 11 pamberi pemuvakidzani.
Nhanho 1. Kubva ku iPhone kana iPad iyo iwe yaunoda kugadzirisa kune iOS 11 ikozvino, shanyira iyi link, uchiita chokwadi chekuti iwe unorivhura zvakananga muSafari browser, kwete mune chero kumwe kunyorera kana mune chero imwe browser.
Nhanho 2. Tevere, iwe unozotamiswazve ku "iOS Beta Software Mbiri", ngatiende kune chimiro che beta beta dzeIOS 11. Panguva ino unofanirwa kuchenjera nekuti uchafanirwa kudzvanya "Isa" katatu, wobva wasarudza iyo sarudzo kuti utangezve yako terminal.
Nhanho 3. Kana yako iPhone kana iPad yatangazve, vhura iyo, vhura iyo Zvirongwa app uye enda kune General chikamu -> Software kugadzirisa. Kana zvese zvikafamba mushe (zvirokwazvo zvave nazvo), iwe uchaona kuti beta 2 yeIOS 11 yave kuwanikwa kurodha pasi nekumisikidza kuburikidza neOTA kubva kuchishandiso chaicho. Kana iyo yekuvandudza isingaoneke, mirira maminetsi mashoma uye edza zvakare. Chii chisiri kubuda izvozvi? WTF! Tangazve chigadzirwa zvakare uye iwe uchaona kuti ino nguva inoita sei.
Maitiro acho akafanana nechero imwe gadziriso yepamutemo kana yeruzhinji beta chirongwa saka kana zvapera, ingo namatira kunakidzwa nezvinhu zvitsva mu iOS 11.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Maitiro ekuisa iOS 2 beta 11 mahara pasina account yekuvandudza
Izvi zvinogadzirisa warandi here?
Unorasa waranti yako uchizviita nenzira iyi here?
Mangwanani akanaka Carlos. Ini ndingashinga kutaura kuti HAURASI warandi sezvo iri software yekuvandudza iyo, kana usiri wekupedzisira kufarira, ingo dzorera yako terminal uye ndizvozvo! Kunyange zvakadaro, sezvo ini ndisiri gweta kana nyanzvi mune izvi, zvakanakisa kutarisa mamiriro eiyo Apple vimbiso munyika yako, nekuti ivo vanosiyana pakati penzvimbo. Kwazisai uye ndinokutendai zvikuru nekutiverenga uye nekutora chikamu.
Hazvina kurasikirwa garandi. Iwe hausi kuita iyo jailbreak.
Luis wechiRoma akadaro
Bvunza. Ini ndakaisa iyo beta yeIOS 11, handina kuifarira, ndakaedza kudzokera kuIos 10.3.2 uye yangu iPhone yanga yasara neiyo iTunes skrini.
Ndakaedza kudzoreredza, kugadzirisa uye ini handikwanise kuiburitsa imomo, pakupera kwemaitiro apo iyo firmware yekumisikidza iri kuipedza inosvetukira kumashure kuchiratidziro ine iTunes logo.
Pane chero munhu anga aine dambudziko iri? Unoziva here kuti ungazvigadzirisa sei?
Pindura Luis Román
Chinhu chimwe chete chakaitika kwandiri, wakakwanisa kuchidzorera here?
Chaizvoizvo chinhu chimwe chinoitika kwandiri, wakakwanisa sei kuzvigadzirisa?
Luis, ini handina kumbova nedambudziko, asi edza kuiisa muDFU, kuti ugone kuisa iyo 10.3.2
Kana iwe ukaisa iyi beta kana iyo yepamutemo ichibuda ini ndichave nayo kuti ndiiise kana ini ndichafanirwa kubvisa iyo beta kutanga
Haufanire kubvisa chero chinhu. Izvo iwe zvaunogona kuita ndezvekuti, kana tenzi achibuda kana iyo iOS yaburitswa; edza kuiisa neKudzorera .. Saka kuti iite shanduro yakachena.
Kana zvisiri, siya zvakadaro uye hapana chinoitika. Haichazove Beta iyo yauinayo. Ingoramba uchiisa zvidzoreso.
Ndiwo mubvunzo usingafadzi wandaverenga pa iPhone nhasi sezvo uripo.
Kana ini ndikaiisa uye ipapo vhezheni itsva ikabuda, ndinowana iyo yekugadzirisa ndega kana ndinofanira kuita maitiro zvakare? Ndatenda
Pindura kuna SaúL
Kana panopera zvese, ini handinzwe kugadzikana neiyo nyowani beta, ndinodzokera sei kuIOS yaive kumberi?
Ini ndinogona kudzokera kune yapfuura software mushure mekunge ndaisa iyo beta?
Iyi ndeimwe yevagadziri betas iyo kana ukadzima yako Apple foni inogona kukiya foni yako kana yakanaka chose? Ndatenda !!
Iyo inondidzosera kune peji iyo iyo isingandipe chero chinongedzo chekuburitsa uye haina otomatiki kurodha chete matatu mabhokisi achindiudza iyo nhamba yekutora yakaitwa yefaira.
zvakanaka chose sezvo iri apple mugadziri wemufaro
Sarudzo yekutaura kuti pane inofanira kuiswa katatu haibude
Ndiri kutya kuti haichashande
Jose Antonio mune yangu yekupedzisira komendi siya chinongedzo cheiyo beta yeIOS 11 kana ichishanda muchokwadi ini ndakaiisa uye iri kufamba zvakanaka .. Ndinovimba ndinogona kukubatsira !!!
Ndatenda ADV, ndichaedza
Bata Bvudzi Salon Me, yemahara kwenguva yakati rebei
Iyo yekubata ID yeinotevera iPhone inoenderera ichityora Apple musoro